‘जर्मनीका लागि अब फाइनलसरह’- फिफा विश्वकप २०१८ - कान्तिपुर समाचार
‘जर्मनीका लागि अब फाइनलसरह’
असार ६, २०७५ रोयटर्स
भाटुटिन्की — जर्मनीका कप्तान म्यानुयल नोयरले मंगलबार विश्वकपमा आफ्नो टोलीका लागि बाँकी रहेको समूह चरणको दुई खेल फाइनलजस्तै भएको बताएका छन् । प्रतियोगिताबाट नबाहिरिन जोगिनलाई टिमभित्र स्पष्ट रूपमा छलफल भइसकेको उनले जनाएका छन् ।
मेक्सिकोसँग आइतबार आफ्नो पहिलो खेलमा जर्मनीले १–० को अप्रत्याशित हार भोग्नुपरेको थियो । डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीलाई त्यसैले समूह ‘एफ’ को बाँकी रहेको सोचीमा शनिबार हुने स्वीडेन र बुधबार कजानमा दक्षिण कोरियासँग हुने खेलमा अत्यधिक दबाब रहने छ ।
‘अब हामीसँग फाइनल खेलमात्र बाँकी छन् । खेलाडीले आफूहरूमा क्षमता छ भनेर देखाउने बेला आएको छ, तर हामीले सक्छौं भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ नोयरले भने । रुस यात्राअघि जर्मनीलाई सन् १९६२ मा ब्राजिल पछि पहिलो विश्वकप उपाधि रक्षा गर्ने टोलीको रूपमा हेरिएको थियो । तर मेक्सिकोसँगको पराजयपछि टोलीको अन्तिम १६ मा नै पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
‘अघिल्लो खेललाई गुनासो गरेर हुनेवाला केही छैन, त्यसले केही परिवर्तन ल्याउँदैन जुन हामीलाई थाहा नै छ,’ नोयरले भने, ‘हामीले यी सबै विषयलाई जतिसक्दो पछाडि राख्न सक्नुपर्छ ।’
नोयरका अनुसार प्रशिक्षक जोचिम लोले मेक्सिकोसँगको कमजोर प्रर्दशनपछि आपतकालीन बैठक राखेका थिए र त्यसमा खेलाडीले केही प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘हाम्रो दोहोरो कुरा नै भएन, हामी सुनेर मात्र बस्यौं । किनभने स्वीडेनसँग हामी पनि राम्रो हुन चाहन्थ्यौं,’ नोयरले भने, ‘टिमको यो बैठक लामो समयसम्म चलिरहयो ।’
प्रकाशित : असार ६, २०७५ १०:१६
केनको ‘डबल’ मा इंग्लिस खुसी
असार ६, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
भोल्गोग्राड — घडीको सुईले ९० मिनेट छोइसकेको थियो । ह्यारी केन त्यहीं थिए, जहाँ उनी हुनुपर्थे । प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटले त्यो पेनाल्टी एरियामा अरु कोही होस् भनेर त चिताउन पनि सक्ने थिएनन् । र, इंग्लिस पाराले गोल पनि भयो । कर्नर, फ्लिक, ब्याक पोस्टमा हेडर ।
नतिजा इंग्ल्यान्ड विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेललाई सुखद अन्त्य दिन सफल रह्यो ।
डर थियो, कतै इंग्ल्यान्डको भाग्यले ठगिने त होइन ? तर अन्त्यमा इंग्ल्यान्ड टयुनिसियामाथि २–१ ले विजयी रह्यो । यसका लागि हकदार पनि देखिन्थ्यो । यहाँनिर सम्झनैपर्छ, इंग्ल्यान्डले सन् १९५० यताका विश्वकप र युरोपेली च्याम्पियसिपको समूह चरणमा ५ अंकमात्र बटुल्न सकेको छ, त्यो भन्दा बढी होइन ।
इंग्ल्यान्डले टयुनिसियालाई दबाबमा राखेकै हो, तर खेल १–१ को बराबरीमा छुट्यो भने त त्यो साउथगेटलाई टाउको दुखाइ हुन्थ्यो नै । त्यसमाथि इंग्ल्यान्डले पस्केको खेलले जित माग्थ्यो । केनले नै इंग्ल्यान्डलाई कर्नरबाट गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । तर रोमाञ्चक खेल पस्केर पनि इंग्ल्यान्ड जितको स्थितिमा पुगेको थिएन । टयुनिसियाको बराबरीमा पेनाल्टी गोल थियो ।
त्यो पेनाल्टी यस्तो स्थितिमा तयार भएको थियो, जुन स्थिति आवश्यक नै थिएन । यस्तोमा देखियो, इंग्ल्यान्डका खेलाडीमा राम्रो खेल्ने तत्परता त थियो तर जित हात पार्ने मनसाय थिएन । र, यहाँनिर नै केन आइपुगे । उनले ‘टिस्टिङ’ हेडर मदतले गोल गरे । अब इंग्ल्यान्ड आइतबार पानामालाई हराएर दोस्रो चरणका लागि छनोट हुन सक्नेछ ।
यस्तोमा इंग्ल्यान्ड मात्र होइन, बेल्जियमका लागि पनि समूह ‘जी’ को आ–आफ्नो अन्तिम खेलमा धेरै तनाव लिनुपर्ने छैन । भोल्गोग्राडको अनुभव इंग्ल्यान्डका लागि साँच्चै मीठो नै रहयो । कसैले भन्न सक्ने छैन, इंग्ल्यान्ड नजितेको भए राम्रो भनेर । टयुनिसियाको खेलसामु इंग्ल्यान्ड धेरै अगाडि देखिन्थ्यो । मात्र उनीहरूले जसरी खेले, त्यसले समर्थकको मन भने खेल नसकिएसम्म धडकिरहयो ।
खासमा साउथगेटले आफ्नो वचन राखेकै हुन् । इंग्ल्यान्डले उनको दाबीअनुसार लयमा देखिएको आक्रामक खेल प्रदर्शन गर्‍यो । इंग्लिस खेलाडीको पास गर्ने कलामा गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन । विशेषत: पहिलो हाफमा यति धेरै आक्रमण बुनियो कि गोल त धेरै हुुनुपर्ने सोच आउन सक्छ । खेलको सुरुमै इंग्ल्यान्ड सायद केही हदसम्म निर्दयी हुनुपथ्र्यो, आफ्नो प्रतिद्व्रन्द्वीमाथि ।
– द गार्डियन
प्रकाशित : असार ६, २०७५ १०:१५
के न्याय के अन्याय
सम्पादकीय श्रावण २, २०७६
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना साउन १ देखि सुरु हुँदा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि कसरी हुन सक्ला भन्ने बहस जरुरी भएको छ । सुधारका लागि न्यायपालिकाले आवधिक...
कृष्णप्रसाद पौडेल श्रावण २, २०७६
रसायनमा आधारित कृषि प्रणालीले अनगिन्ती समस्या थोपरेको छ । यसले मानिस, माटो र पर्यावरणमा विष फैलाउँदैछ । मानिसमा निको नहुने स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढिरहेका छन् । माटो भित्रको...
चन्द्रकिशोर श्रावण २, २०७६
तटबन्ध नदीको समानान्तरमा दुइटै किनार भएर बनाइन्छ भने बाँध नदीको प्रवाहलाई रोक्न वा जल सञ्चय गर्न । तराईमा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध एउटा विकल्प मानिएको छ ।...
फोहोर व्यवस्थापनको दिगो मोडल
डा. ढुण्डीराज पाठक श्रावण २, २०७६
दशकौंदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आए पनि आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा यो दिगो हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दुई वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्न बनाइएको...
बेपत्ता बुबालाई पत्र
सुदन अधिकारी श्रावण २, २०७६
बुबा, यो पत्र तपाईंले पढ्नुहुनेछैन भन्ने मलाई थाहा छ । तर तपाईंसँग एउटै मोर्चामा होमिएका सहयात्रीलाई अनेक याचना गर्दा पनि नसुनेपछि बाध्य भएर मैले तपाईंलाई सम्बोधन गरेको...